Muxuu cirku buluug u yahay oo aanu u ahayn midab kale? | Saadaasha Shabakadda
Casudi casals | | Ciencia
Yaan weydiin ama waligiis is weydiin su'aashan? Waxaana laga yaabaa inay intaas nooga sheegeen ... "Waa milicsiga badaha!" Waa wax lagu qoslo, haddii aan su’aasha gadaal u weydiino, jawaabta caanka ah ee ah sababta ay badaha u buluugsan yihiin badanaa waa samada oo buluug ah. Waxaa jira wax aan si fiican ugu habboonayn sax? Dabcan, uma baahnid inaad raadiso cidda "rinjiyeynaysa" waxa, laakiin halkii ay ka iman lahayd midabku. Falaaraha cadcad ee qoraxda ka soo baxa Qoraxda ee la falgala jawiga, ayaa ah kuwa ugu muhiimsan ee masuulka ka ah.
Marka falaadhaha iftiinka ahi ay maraan meydad hufan ama muuqaal leh, mid kasta oo ka mid ah midabada sameeya iftiinka cad ayaa kala soocaya xagal cayiman. Had iyo jeer waxay kuxirantahay dhexdhexaadka ay soo maraan, jihada iyo qaabka ayaa isbedelaya. Iftiinka cad ee ay sii dayso Qorraxdu wuxuu u dhigmaa qayb yar oo ka mid ah hirarka oo dhan oo sameeya qaybta elektromagnetic-ka. Kala duwanaanta midabku wuxuu la mid yahay qaanso roobaadka. Si loo arko burburka midabbada, waa ku filan tahay in la sameeyo shucaac iftiin ah oo ku gudubta meel bir ah
1 Kala-jajabinta midabada iftiinka
2 Haa, cirka ayaa buluug u muuqda maalintii. Laakiin had iyo jeer maahan! Jilaya?
2.1 Had iyo jeer waxay kuxirantahay xaddiga dambas iyo boodhka hawada ku jira
Kala-jajabinta midabada iftiinka
Maaddaama midabada kala daatay, dhererka buluugga iyo buluugga ayaa ka gaaban marka loo eego kuwa huruudda ah (dhexdhexaad dheeri ah) ama xad dhaaf ah, casaan ah, oo dherer dhaadheer leh. Taasi waa waxa keena noocan ah taageereyaasha midabada. Marka falaadhaha qorraxdu ay dhex maraan jawiga, waxay ku gudbaan uumiga biyaha, boodhka, dambaska, iwm. Halkaan, shucaaca iyo fallaaraha buluugga ah waxaa loo leexiyaa si aad u ballaaran ka badan huruud iyo casaan.
Raajooyinkan, oo si isdaba joog ah ula dhacaya qaybaha hawada oo ay ku raran yihiin huur, boodh iyo dambas, ayaa sababa isbeddel joogto ah oo ku yimaada dhabbaha. Nidaamkan waxaa loo yaqaan "faafidda." Tani waa waxa sababa midabkaas buluuga ah. Adoo ku faafaya afar jeer ka dhaqso badan midabada casaanka ah ee dhererka dhererkiisu yar yahay, waa waxa na sababa inaan yeelano dareenka guud ee buluugga ah iyo inaanu u jeedsan hal dhibic.
Haa, cirka ayaa buluug u muuqda maalintii. Laakiin had iyo jeer maahan! Jilaya?
Fasiraadda sawirka ee hooska kala duwan | Gamavision
Fallaadhaha iska leh muuqaalka jaallaha iyo guduudku waa ka soo horjeedka. Dhererka dhaadheer ee dhererkoodu wuxuu ka dhigayaa inay sii kala firdhaan. Adoo ku sii socdaalaya saf toosan, waxay keenaysaa midabbada inay isku milmaan, iyagoo siinaya midab liin ah. Waxay kuxirantahay waqtiga maalinta aan nahay, midabka cirka, waa run inay kala duwanaan karto. Wax aan arki karno goorta qorraxdu soo baxdo ama ay dhacdo, oo aan aragno Qorraxda oo u dhow heerka badda ama cirifka.
Fallaaraha iftiinka halkan waa inay maraan xaddi badan oo dhumucda jawiga. Isdhexgalka qasabka ah ee qaddarka aad u badan ee uumiga uumiga biyaha, dhibcaha, boodhka, iwm, wuxuu ku dhammaanayaa inuu qasbo kuwan soo socda. Rays iftiin u eg buluug iyo violet ayaa si isdaba joog ah u kala firdhay dhinac. Raajooyinku waxay ku dhowyihiin barta casaanka, oo leh marinno toosan, ayaa sii socota, oo na siineysa midabkaas midabka liinta iyo casaanka ah.
Had iyo jeer waxay kuxirantahay xaddiga dambas iyo boodhka hawada ku jira
Awoodda midabka casaanka ah ee cirka looga arko qorrax-soo-baxa ama qorrax dhaca had iyo jeer waxay kuxirantahay xaddiga dambas iyo boodhka hawada kujira, marka laga reebo uumiga biyaha. Taasi waa sidoo kale sababta ugu weyn ee markay qarxaan ama dab kacaan tusaale ahaan, tirada boorka iyo dambasku ay kordhaan, oo ay keento in midabadaas xitaa si muuqata loo arko.
Moodel wanaagsan oo ifafaaladan ah ayaa laga helay Mars. Intaa waxaa dheer, hadda inuu guuleysanayo, waxay u baahan tahay wax ku habboon si loo sharraxo sababta meeraha had iyo jeer u eg yahay guduud. Waa si hufan sababtoo ah "qadarka jawiga" ay leedahay, inay aad u fiican tahay. Intaa waxaa dheer, si ka duwan Dhulka, oo badanaa oksijiin ah, halkaas wuxuu ka kooban yahay inta badan kaarboon dioxide. Si wada jir ah iyo qaddarka badan ee oksaydhka birta ah, iyo dabaylaha dabayl kiciya ee boodhka kiciya, waxay Mars ka dhigaan meeraha cas, si ka duwan Dhulka, meeraheenna buluugga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Muxuu cirku buluug u yahay oo aanu u ahayn midab kale?